Henrikh Mkhitaryan oo weerar ku qaaday tababare Unai Emery – Gool FM
(London) 15 Nof 2019. Laacibka milkiyadiisu ay leedahay Arsenal haatana qaab amaah ah ugu ciyaara kooxda Roma ee Henrikh Mkhitaryan ayaa ku dhaleeceeyay tababare Unai Emery taatikada adag uu adeegsado.
Dhinaca kale Henrikh Mkhitaryan ayaa ku andacooday inuu si xoogan diirada u saaray isla markaana ay taasi u diiday fursad uu si xor ah ugu ciyaaro.
Kubad sameeyaha heerka caalami ee reer Armenia ayaa go’aansaday inuu u dhaqaaqo horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga horaantii xagaagan, wuxuuna heshiis hal xilli ciyaareed oo amaah ah ugu biiray kooxda AS Roma.
Laacibkii hore kooxaha Borussia Dortmund iyo Manchester United ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Unai Emery wuxuu si gaar ah diirada u saara taatikada, waana sababta uu isbadalka ugu yimid doorkii aan ku lahaa kooxda, mana helin daqiiqado badan ee sidii hore ah”.
“Waxaan ka ciyaari jiray garabka weerarka, laakiin la shaqeynta Unai Emery waxaan u ciyaarayay sidii qadka dhexe ee kubad burburinta ah”
“Waxay arrintaas sababtay in kooxda aan ka caawin waayay goolal badan ama aan gacan uga geysan waayay inaan sameeyo wax intaas dheer”.
“Waxaan jeclahay inaan ku ciyaaro xuriyad weyn, isla markaana aan u dhaqaaqo meelaha banaan ee gudaha garoonka ah, laakiin arrintaas la shaqeynta Unai Emery, suurtogal ma aysan noqonin, sababtoo ah waa inaad sameysaa shaqada uu kuu diro macalinka”.